Naftaada ku raaxaysogaalnimadaada wax la Spotify Radio waqti kasta iyo meel kasta oo
< 8 Spotify Gift Card
Qaybta 1.How in Dhagayso Windows
Qaybta 2.How in Dhagayso Mac
Qaybta 3.How in Dhagayso iPhone
Qaybta 4.How in Dhagayso iPad
Qaybta 5.How in Dhagayso Android
Qaybta 6.Here yihiin qaar ka mid ah hawlaha Radio Spotify iyo waxa ay qaban
Download music Spotify free la TunesGo iyo maqli mar walba meel kasta
1. Sida loo Dhagayso Windows
Spotify adeeg geeyo music kale oo uu leeyahay radio loo yaqaan Spotify Radio. Radio Spotify waxaa laga heli karaa 24/7 iyo sida ay tahay in kuu ogolaanayaa inaad ogaan music aad u wanaagsan ah idaacad dhabta ah. Waxad abuuri kartaa adiga kuu gaar ah oo ku saabsan fannaaniinta, heeso iyo qaybaha keeni waayo-aragnimo radio kartoo in aad Idaacada dalwaddii. Radio wuxuu kuu ogol yahay qashanka aan xad lahayn kuu oggolaadaan in aad qaadato si buuxda gacanta waxa aad rabto in aad maqashaan iyo marka aad rabto in aad wax ka maqashaa.
Radio Spotify waxaa lagu daray in si dhan barnaamijyadooda Spotify. Waxaad heli kartaa radio Spotify ee aad taleefan, laptop, kiniin iyo dhammaan qalabka kale ee taageeraya Spotify Apps. Isticmaalayaasha uma baahna in ay soo bixi app gaar ah ama software u Radio Spotify ah.
Ka dib markii saxiixin, degsado iyo ku rakibidda app Spotify ee website-ka Spotify, furo software Spotify ka on your computer Windows.
Laga soo bilaabo dhinaca bidix ee app Spotify ah, guji "Radio"
On shaashadda soo socda, guji New Station in lagu daro saldhigyada aad rabto in aad u dhagaystaan ​​aad profile.
Next, ku qor magaca of a track, artist ama playlist aad rabto in lagu daro in aad raadiyaha oo ay doortaan ka natiijooyinka raadinta.
Waa sidaas; aad samaysay iyadoo saldhigga cusub. Waxaad u abuuri kartaa ilaa 20 saldhig inay dhegaystaan ​​waqti.
2.How in Dhagayso Mac
Spotify Radio sidoo kale waxaa laga heli karaa Mac OS oo uu leeyahay hab la mid ah hawlgalka iyo qoreysa sida in Windows.
Saxiix, dejisan iyo rakibi app Spotify ee Mac OS website-ka Spotify, furo software Spotify ku saabsan Mac.
Laga soo bilaabo dhinaca bidix ee app Spotify ah, guji "Radio".
Waxaad hadda ku raaxaysan karaan Spotify Radio aad Mac. Waxaad u abuuri kartaa ilaa 20 saldhig inay dhegaystaan ​​waqti.
3. Sida loo Dhagayso iPhone
Si aad u dhagaystaan ​​Spotify Radio aad iPhone,
Download app Spotify ee iPhone App ka Apple Store.
Wuxuu furaa soo bixi Spotify App iyo saxiixa ama saxiixa in in aad xisaabta.
Tubada menu ee geeska bidix sare ee shaashadda.
Laga soo bilaabo fursadaha bixiyo tuubada on 'Radio'.
Si aad ku dari saldhigyada in aad app Spotify on iPhone, tuubada 'New Station' button.
Ku qor magaca ah track, artist ama playlist aad rabto in lagu daro in aad raadiyaha oo ay doortaan ka natiijooyinka raadinta.
Waxaad hadda ku raaxaysan karaan Spotify Radio aad iPhone. Mar kale, waxaad samayn kartaa ilaa 20 saldhig inay dhegaystaan ​​waqti.
4.How in Dhagayso iPad
Si aad u dhagaystaan ​​Spotify Radio on your iPad;
Download app Spotify ee iPad ka App Apple Store.
Wuxuu furaa soo bixi Spotify App iyo saxiixdo (haddii aadan lahayn xisaab ah) ama la saxiixato in aad xisaabta.
Laga soo bilaabo fursadaha bixiyo, garaac "Radio".
Si aad ku dari saldhigga si aad Spotify app ee iPad, tuubada badhanka 'saldhiga New'.
Waxaad hadda ku raaxaysan karaan Spotify Radio on your iPad. Waxaad u abuuri kartaa ilaa 20 saldhig inay dhegaystaan ​​waqti.
5.How in Dhagayso Android
Si aad u dhagaystaan ​​Spotify Radio qalabka Android aad;
Download app Spotify ee qalabka Android ka Play Google Store.
Laga soo bilaabo fursadaha bixiyo tuubada 'Radio'.
Si aad ku dari saldhigga si aad app Spotify qalabka Android aad, tuubada badhanka 'saldhiga New'.
Waxaad hadda ku raaxaysan karaan Spotify Radio qalabka Android aad. Waxaad u abuuri kartaa ilaa 20 saldhig inay dhegaystaan ​​waqti.
6. Waa kuwan qaar ka mid ah hawlaha Radio Spotify iyo waxa ay qaban
Button Next: siyoodba ama riixaya badhanka this boodi doonaa si ay ula socdaan soo socda.
Thumbs kor / hoos: Isticmaal suulka ah ama suulka hoos u ogolaato Spotify hesho ciyaarta music kaamil ah oo aad u.
Delete rabin Station : Si aad u tirtirto saldhigyada aadan rabin, si fudud guji X in muuqataa marka aad dul istaagin saldhigga.
Inkastoo Spotify Radio waa raadiye weyn u isticmaala, waxaa uu ku xadidayaa tirada qashanka diyaar u isticmaala lacag la'aan ah. Free users waxaa loo ogol yahay inay u boodboodaan jeer 6 oo kaliya halkii saac iyaga in ay dhagaystaan ​​wax kasta oo ay maraan jidkii haddii ay jeclaan ama aan halka dadka isticmaala lacagta ka boodi kartaa jeer sida ugu badan ay doonayaan yimaado.
> Resource > Spotify > bal iska raaxayso, oo la Spotify Radio Markasta oo meel